တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: August 2017
Posted by မေဓာဝီ at 4:03 PM3comments
Posted by မေဓာဝီ at 10:30 PM 1 comments
လွတ်မြောက်ရစေ ... ။
Posted by မေဓာဝီ at 3:31 AM0comments
Posted by မေဓာဝီ at 3:59 AM0comments
ကျွန်မတို့ ဝန်းကျင်မှာ ခုတလော အများပြည်သူ ထိတ်လန့်နေတဲ့ H1N1 ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်ဖို့ရာ အမျိုးမျိုး လှုံ့ဆော်ကြတာကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ လှုံ့ဆော်ကြတဲ့အတိုင်း ကာကွယ်ကြတာကို အထင်ရှားဆုံး မြင်နိုင်တာကတော့ လူတော်တော်များများရဲ့ မျက်နှာပေါ်က နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်ကို အုပ်ထားတဲ့ mask တွေပါပဲ။
လမ်းပေါ်မှာ၊ ကားပေါ်မှာ၊ ဈေးဆိုင်မှာ၊ ကျောင်းတွေမှာ mask တွေ အပြိုင်အဆိုင် တပ်နေကြတဲ့အပြင် mask တပ်ထားတဲ့ ပုံတွေ ဖေ့စ်ဘုတ်လို ဆိုရှယ်ပေ့ခ်ျတွေမှာပါ ဖက်ရှင်တစ်ခုလို သူ့ထက်ငါ တင်နေကြတာ လည်း မြင်ရပါတယ်။ ဒါဟာ မကောင်းလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ mask တပ်ထားတဲ့အခါ ကိုယ် ချောင်းဆိုးရင် နှာချေရင်လည်း သူတပါးဆီ မရောက်တော့ဘူး၊ သူတပါး ချောင်းဆိုး နှာချေလည်း ကိုယ့်ဆီ မရောက်နိုင်ဘူး ဆိုတော့ H1N1 တွင် မကဘူး၊ တခြားကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးမွှားရန်ကပါ ကာကွယ်နိုင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ … … လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ mask တွေကို စနစ်တကျ မတပ်ကြ … မစွန့်ပစ်ကြတဲ့အခါ …. ။
နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်မှာ အနီးကပ် တပ်ရတဲ့ mask တွေကို စနစ်တကျ မသုံးစွဲတတ်ကြတဲ့အခါ ပိုပြီး ဆိုးရွားတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကျောင်းမှာ ကလေးတချို့ဟာ mask တွေကို စတိုင်လုပ် တပ်ကြတယ်။ စကားပြောရ အသက်ရှူရ မုန့်စားရ ခက်လာတော့ ချွတ်ပြီး ဟိုနား ဒီနား တင်ထား၊ စကားပြောကြ၊ မုန့်စားကြလုပ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ တခါ ပြန်ယူပြီး တပ်ကြပြန်တယ်။ အဲဒီလို မလုပ်ဖို့ ကျွန်မမှာ အထပ်ထပ် ပြောပေမဲ့ လုပ်တဲ့သူက ပြန်လုပ်ကြတာပါပဲ။ တချို့မိဘတွေကတော့ သူတို့ သားသမီးတွေကို သေချာမှာပါတယ်။ တခါဖြုတ်ပြီး ပြန်မတပ်ဖို့၊ အမှိုက်ပုံးထဲ သေချာ စွန့်ပစ်ဖို့ စသဖြင့်ပေါ့။
အမှိုက်ပုံးထဲ စွန့်ပစ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ လတ်တလော မြင်တာ ပြောရရင် ရုပ်သံဌာနတစ်ခုက H1N1 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လမ်းသွားလမ်းလာတွေကို အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အစီအစဉ် live လွှင့်ပါတယ်။ မြို့လယ်ခေါင်က မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံထဲမှာပါ။ အဲဒီမှာ ကလေးငယ်တယောက်က အမှိုက်ပုံးနားမှာ ကျနေတဲ့ mask ကို ယူတပ်နေတာ မြင်လိုက်ရပါတယ်။ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူကလည်း အဲဒီကလေးငယ်ကို တားတော့ တားလိုက်တယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မ တော်တော်လေး ထိတ်လန့် မိတယ်။ အမှိုက်တွေကို စနစ်တကျ မစွန့်ပစ်နိုင်ကြသေးတဲ့/ စွန့်ပစ်ရမှန်း မသိတဲ့/ စွန့်ပစ်တဲ့ စနစ် မရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ ဒီလို ကလေးငယ်တွေ ဘယ်လောက်တောင် များနေမလဲ။
အမှိုက်ကို စနစ်တကျ မစွန့်ပစ်တဲ့အကြောင်း ကြုံလို့ထပ်ပြောရရင် ရန်ကုန်မြို့ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံတခုရဲ့ အမှိုက်ကန်မှာ အမှိုက်အိတ်ကြီးနဲ့ တလုံး စွန့်ပစ်ထားတဲ့ အသုံးပြုပြီးသား ဆေးထိုးအပ်တွေကို လူတချို့က မွှေနှောက်ရှာဖွေ ရွေးယူနေတာ ကျွန်မအဖေ ကိုယ်တိုင် မျက်စိနဲ့ တပ်အပ် မြင်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ အမှိုက်နဲ့ အမှိုက်ပုံးတွေဟာ မမျှတတဲ့အတွက် ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ထားပေးတဲ့ အမှိုက်ပုံးတွေရဲ့ ဘေးမှာ တောင်ပုံရာပုံ ပုံထားရတဲ့ အမှိုက်တွေ … အဲဒီအမှိုက်တွေကို ထိုးဆွ ရှာနေကြရှာတဲ့ လူတွေ၊ ခွေးတွေကို … မမြင်ရက်စရာ မြင်နေရပါတယ်။ ဒီအမှိုက်ပုံတွေကနေ ရောဂါမျိုးစုံ ကူးစက်ပြန့်ပွါး နိုင်တာကြောင့် အမှိုက်တွေကို အရင်ဆုံး ထိမ်းချုပ်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ် မဟုတ်လား။
နောက်တခုကတော့ Hand Sanitizer လို့ ခေါ်တဲ့ လက်သန့်စင်တဲ့ ဆေးရည်ဂျဲလ်ပါ။
H1N1 ကာကွယ်ဖို့ သတိပေးချက်တွေထဲမှာ လက်ကို သေချာဆေးရမယ်၊ လက်သန့်စင် ဆေးရည်ကို သုံးစွဲရမယ် … စသဖြင့် ပါဝင်ပါတယ်။ လက်သန့်စင်ဆေးရည်ဟာ မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယား တွေကို သေစေနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် အထူးသဖြင့် ဆေးရုံတွေ ဆေးခန်းတွေမှာ လက်သန့်စင်ဆေးကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ဒီဆေးရည်ကို အတိုင်းအဆနဲ့ အသုံးပြုကြပေမဲ့ မသိနားမလည်တဲ့ ကလေးငယ်တွေက အလွန်အကျွံ သုံးစွဲ ကြတဲ့အခါ … ။
ဒါကလည်း ကျွန်မတို့ ကျောင်းမှာ ကြုံရတာပါပဲ။ တရက် Grade 1 အတန်းထဲကို ဝင်သွားတဲ့အခါ စာသင်ခန်းတခန်းလုံး မွှေးသလိုလို နံသလိုလို အနံ့တွေ ရောပြွမ်းပြီး ထောင်းထောင်းထနေပါတယ်။ ဒါနဲ့ မေးမြန်းကြည့်တော့ ကလေးတွေက လက်သန့်ဆေးရည်တွေ အားရပါးရ လိမ်းထားကြပါသတဲ့။ သူတို့အားလုံးနီးပါးဆီမှာ ဆေးရည်ဗူးလေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့။ အနံ့အမျိုးမျိုး၊ အရောင်အမျိုးမျိုး၊ ဗူးပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးပဲ။ ပါလာတဲ့သူတွေ ဗူးတွေစားပွဲပေါ် လာတင်ဖို့ ပြောပြီး ဒီလက်သန့်ဆေးရည်ကို အများကြီး မသုံးဖို့နဲ့ ဘယ်လို သုံးစွဲရမယ်ဆိုတာ ရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၅ နှစ် ၆ နှစ် ကလေးတွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ နူးညံ့ပါးလွှာတဲ့ အရေပြားလေးတွေဟာ ဓာတုပစ္စည်းတွေပါတဲ့ လက်သန့်ဆေးရည်တွေ အလွန်အကျွံသုံးစွဲဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒါကို လူကြီးမိဘတွေလည်း သတိထားသင့် ပါတယ်။ သူတို့လေးတွေက အနံ့လေး မွှေးပြီး လိမ်းလိုက်ရင် အေးအေးလေး ဖြစ်နေတော့ သဘောကျကြပြီး ခဏခဏ လိမ်းကြတယ်၊ သူတို့ချစ်တဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေကိုလည်း လက်ဖြန့်ခိုင်းပြီး အပုံလိုက် ညှစ်ချလို့ လိမ်းစေတယ်။ တရက်ထဲနဲ့ တဗူးကုန်လုနီးပါး သုံးထားတဲ့ ကလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
စာသင်ချိန်အပြီး Google မှာ side effect of hand sanitizer ကို ရှာကြည့်တော့ အလွန်အကျွံသုံးစွဲရင် ဖြစ်နိုင်တာတွေ တော်တော်များများကို တွေ့ရပါတယ်။ အရေပြားထိခိုက်ခြင်းက အစပြုလို့ နောက်ဆုံး ကင်ဆာ ရောဂါအထိ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတွေကို ဖတ်ရတော့ ဘုရားတ မိတယ်။
လက်သန့်ဆေးရည်တွေမှာ ပါဝင်နိုင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ Triclosan နဲ့ Parabens တို့ဟာ ဘက်တီးရီးယားတွေ ရှင်သန်ကြီးထွားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက မနည်းပါဘူး။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန် ဓာတုအဖွဲ့အစည်းက တွေ့ရှိချက်အရ Triclosans ဟာ ရင်သားကင်ဆာဆဲလ် ရှင်သန်ကြီးထွားကို အားပေးအားမြှောက် ပြုပါသတဲ့။ ဒါ့အပြင် ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်က လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရတော့ ဦးနှောက်က ဆဲလ်တွေကိုလည်း သေစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Parabens ကလည်း အရေပြား ခြောက်ခြင်း, ယားယံခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်သလို ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောစနစ်၊ ဟော်မုန်းစနစ်တွေကို ထိခိုက်စေပြီး ကင်ဆာရောဂါအထိပါ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
ဒီလက်သန့်ဆေးရည်တွေမှာ အများဆုံးပါတဲ့ အယ်လ်ကိုဟောကလည်း လျက်မိရင်၊ ရှူမိရင် အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တချို့အမျိုးအစားက alcohol free ဆိုရင်တောင် သူ့မှာပါတဲ့ တခြား ဓာတုပစ္စည်းတွေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံစွမ်းရည်ကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗူးလေးတွေကို လေ့လာကြည့်တော့ ဗူးနောက်ကျော ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းစာရင်းက သေးလွန်းလို့ မနည်းဖတ်ရပါတယ်။ အသက် ၆ နှစ်အောက် ကလေးတွေ သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် လူကြီးရ့ လမ်းညွှန်မှုနဲ့ သုံးစွဲရမယ် လို့ သတိပေးချက်တွေ ပါပေမဲ့ ဝယ်ယူသူ အများစုဟာ ဒါတွေကို တကူးတက သိပ်မဖတ်ကြပါဘူး။ လက်သန့်ဆေးရည်ကို နေ့စဉ်သုံးစွဲကြရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတောင် ကြာရှည်မှာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်တယ်လို့လဲ ဆိုထားတာကြောင့် ဒီလက်သန့်စင် ဆေးရည်ဟာ အနည်းအကျဉ်း အသုံးပြုရင် အကျိုးရှိပေမဲ့ အများအပြား အလွန်အကျွံသုံးစွဲရင်တော့ အင်မတန် အန္တရာယ်များတာကို တွေ့ရပါတယ် တဲ့။
မသိနားမလည်တဲ့ ကလေးတွေဟာ အတိုင်းအဆမရှိ သုံးစွဲတတ်ကြတာကြောင့် မိဘတွေ ဆရာတွေ အနေနဲ့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် သတိပေးသင့်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ဒီလက်သန့်စင် ဆေးရည်ဟာ ရေနဲ့ ဆပ်ပြာ အလွယ်တကူ မရှိမှသာ အနည်းအကျဉ်း သုံးရတာ ဖြစ်ပြီး ခဏခဏ မလိမ်းသင့်ဘူးဆိုတာ သူတို့လေးတွေနားလည် သဘောပေါက်အောင် အထပ်ထပ် အခါခါ ပြောပြခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် mask တပ်တာနဲ့ လက်သန့်ဆေးရည် သုံးတာမှ H1N1 ကို ကာကွယ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ အာဟာရဖြစ်တဲ့ အစားအစာတွေ, လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအနှံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ, ဗိုက်တာမင် စီဓာတ်ပါတာတွေ စား၊ ရေများများသောက်၊ ကျန်းမာရေး လှုပ်ရှားမှု တခုခုလုပ်၊ လူထူထပ်တဲ့ နေရာတွေ ရှောင် စသဖြင့် ပြောရပါသေးတယ်။
ကာကွယ်ခြင်းဟာ ကုသခြင်းထက် ပိုပြီး ထိရောက်သတဲ့။
ခုလိုမျိုး လွန်ကဲစွာ ကာကွယ်ခြင်းရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာတဲ့အခါ … ကာကွယ်ရင်း ထိခိုက်တာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ဉာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်ပြီး သင့်တင့်စွာ ကာကွယ်ကြပါလို့ သတိပေးလိုက်ရပါတယ်။
Ref: News Max Health –6reasons to avoid Hand Sanitizers (by Sylvia Booth Hubbard)
(မြန်မာတိုင်းမ် နေ့စဉ် သတင်းစာ - ၁၈.၀၈.၁၇)
Posted by မေဓာဝီ at 5:44 PM 1 comments
စီးဆင်း​နေတဲ့ မြစ်​တစင်း ...
သြဂုတ်​လဆန်းတုန်းက Grade 8 နဲ့ Grade9​ကျောင်းသား​တွေကို သမိုင်း စ သင်​ရတယ်​။ ကျွန်​မ သမိုင်း သင်​မယ်​ဆို​တော့ ​ကျောင်းသူတ​ယောက်​က သမိုင်းသင်​ရမှာ ပျင်းလိုက်​တာ စာသင်​ရင်း အိပ်​​ပျော်​သွားမှာပဲ လို့ ​ပြောတယ်​။ အင်း​လေ ကျွန်​မတို့ ငယ်​ငယ်​ကလည်း သမိုင်းဆိုတာ ပျင်းစရာ ဘာသာရပ်​လို့ သတ်​မှတ်​ခဲ့တာပဲကိုး။
ငယ်​ငယ်​က ကျွန်​မအပါအဝင်​ သူငယ်​ချင်း အ​တော်​များများက သမိုင်းဘာသာရပ်​ကို ငြီး​ငွေ့ကြတယ်​။ သမိုင်းကျက်​ရမှာလည်း ပျင်းတယ်​။ မှတ်​ရခက်​တဲ့ ခုနှစ်​သက္ကရာဇ်​​တွေ၊ နာမည်​​တွေကိုလည်း စိတ်​ပျက်​ခဲ့ကြတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ သမိုင်းစာ​မေးပွဲ​တွေနဲ့ ​ဝေးကွာလာချိန်​မှာ သမိုင်းရဲ့ အ​ရေးပါမှု​တွေကို တစတစ နားလည်​လာပြီး သမိုင်းပညာရပ်​ကို တန်​ဖိုးထားရ​ကောင်းမှန်း သိလာခဲ့တယ်​။
သမိုင်းဆိုတာ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်​ထဲမှာတွင်​ ရှိတာမဟုတ်​ဘူး၊ စာအုပ်​ထဲမှာပဲ ရပ်​​နေတာ မဟုတ်​ဘူး၊ သမိုင်းဟာ စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်​တစင်း ... ။
သူတို့လေးတွေအတွက် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကို ဗြိတိန်နိုင်ငံထုတ် History of the World ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက ကောက်နုတ်ထားပါတယ်။ ဒီစကြာဝဠာကြီးနဲ့ ကြယ်တွေ ဂြိုဟ်တွေ၊ ကိုယ်နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်ပေါ်လာပုံက အစပြုပြီး ဒီနေ့ခေတ် အထိ နှစ်အပိုင်းအခြားအလိုက် ပုံလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြထားတာမို့ စိတ်ဝင်စားစရာ စာအုပ်တအုပ်ပါပဲ။ စာသင်နှစ် တနှစ်တာ အတွင်း ဒီစာအုပ် တအုပ်လုံးတော့ သင်ကြားချိန် ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သမိုင်းက အဓိက ဘာသာရပ် မဟုတ်တဲ့အတွက် တပတ်ကို ၂ ချိန်ပဲ ပါပြီး အတော်အသင့် လောက်သာ ကောက်နုတ် သင်ပေးရမှာပါ။
​ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ် စမသင်ခင် ...
ဝှိုက်​ဘုတ်​မှာ What is history? ဆိုတဲ့ ​မေးခွန်း​လေး စ​ရေးပြီး သူတို့ကို ​မေး​တော့ အ​ဖြေ​တွေ အမျိုးမျိုး ​ပေးကြပါတယ်​။ သူတို့အ​ဖြေ​လေး​တွေကို စုစည်း လိုက်​​တော့ History ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့ ​အ​ဖြေထွက်​လာတာ​ပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ​နောက်​ထပ်​ ​Why is history important? ဆိုပြီး ​မေးခွန်း​လေး ​ထပ်​​မေးလိုက်​ အ​ဖြေ​တွေ စုစည်းလိုက်​နဲ့ အမေး အ​ဖြေ လုပ်​ရင်း သင်​သွားလိုက်​တာ အချိန်​ ကုန်​မှန်းမသိ ကုန်​သွားပါ​ရော။
​အဆင့်​ဆင့်​ ​ပြောင်းလဲလာတဲ့ ယဉ်​​ကျေးမှု၊ ယုံကြည်​ကိုးကွယ်​မှု၊ ဖန်​တီးမှု၊ နိုင်​ငံ​ရေး၊ လူ​နေမှုစနစ်​စတဲ့ အ​ကြောင်း​တွေကို ဥပမာ​လေး​တွေန့ ​ပြောပြ​တော့ ​စော​စောက "အိပ်​​ပျော်​သွားမှာပဲ" ဆိုတဲ့ ​ကျောင်းသူ​လေးလဲ မျက်​လုံး​လေး ​တောက်​ပပြီး စိတ်​ဝင်​တစား နား​ထောင်​၊ ​မေးတဲ့ မေးခွန်း​တွေကို တက်​တက်​ကြွကြွ ဖြေဆိုတာ ​တွေ့ရတယ်​။
​ကျွန်​မတို့ ​ပြောကြ ဆိုကြ ​ဆွေး​နွေးကြတဲ့ထဲမှာ ကမ္ဘာ့သမိုင်း၊ မြန်​မာ့သမိုင်း အကုန်​​စုံလို့ပဲ။ ပတ္တမြားင​မောက်​ပါသလို 9/11 လည်း ပါတယ်​။ King Henry VIII အ​ကြောင်းပါသလို ဂဠုန်​ဦး​စောလည်း ပါတယ်​။ သီ​ပေါမင်း ပါ​တော်​မူတာ ပါသလို ချားလ်​စ်​နဲ့ ဒိုင်​ယာနာ တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်း လည်း ပါတယ်​။ သူတို့သိတာတွေလည်း သူတို့ပြော၊ ကျွန်မသိတာလည်း ကျွန်မက ပြောပေါ့ ... ။
ဒါတွေအားလုံးဟာ သမိုင်းပဲ မဟုတ်လား။ တိုင်းပြည် နိုင်ငံတခုမှာမှ သမိုင်းရှိတာ မဟုတ်ဘူး၊ လူတိုင်းမှာ သမိုင်းရှိတယ်၊ သမိုင်းဆိုတာ ကိုယ် ရှေ့ကိုသွားတိုင်း ကိုယ့်နောက်မှာ အရိပ်လို အမြဲပါနေတာ ... ။
သမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာ အဆိုအမိန့်တွေ ပြောတဲ့အခါ ...
ဒေါက်တာသန်းထွန်းပြောတဲ့ “သမိုင်းကို လေ့လာတာ မအအောင်လို့” ... ဆိုတာလေး ဦးဆုံးပြောပြတော့ သူတို့ သိပ်သဘောကျကြတယ်။ ကျောင်းသား တယောက်က ...
“အိမ်ရောက်ရင် ပါပါးကို သွားမေးရမယ် ... သမိုင်းကို ဘာလို့ လေ့လာရတာလဲ ပါပါး သိလား လို့ .... ဟားဟား ... ပါးပါး သိမှာမဟုတ်ဘူး တီချာ ... ”
ပြောပြီး သူ့ဟာသူ သဘောတွေကျနေသေးတာ။
သမိုင်းကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ပြီးခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး မကောင်းတာဆိုလည်း နောက်ထပ် မဖြစ်ရအောင်၊ ကောင်းတာတွေကို ပြန်လည် အသုံးချရအောင် ... စသဖြင့် ပြောပြရင်း စစ်ဘုရင်ကြီး နပိုလီယံရဲ့ စကား၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီး George Santayana ရဲ့ စကားတွေ ရေးပေးဖြစ်တယ်။
History is the version of the past events that people have decided to agree upon.
သူတို့ကို ရေးပေးခဲ့တဲ့ quote သုံးခုအနက် ကျွန်မကတော့ အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာ ရှယ်လီ ပြောတာကို အနှစ်သက် ဆုံးပါပဲ။
ရှယ်လီက ခုလို ပြောခဲ့သတဲ့။
(Shelley, English poet)
ကဗျာရှည်တပုဒ် ... ။
ကျင်လည်ရာ ဘဝမှာ ကာရန်ညီတဲ့ ကဗျာလှလှလေး တပုဒ် ဖြစ်အောင် ရေးဖွဲ့ဖို့ ကြိုးစားရပါဦးမယ်။
Posted by မေဓာဝီ at 5:57 PM0comments
နှလုံးသားဖြင့် ခံစားသူ ... ။
Posted by မေဓာဝီ at 4:43 PM0comments
တစက်​ နှစ်​စက်​ မိုး​ရေစက်​ ...
တရွက်​ နှစ်​ရွက်​ နုသစ်​ရွက်​...
တခက်​ နှစ်​ခက်​ မာလာခက်​
တရက်​ နှစ်​ရက်​ ​ရေကာတွက်​
ကုန်​ဆုံးသွားတဲ့ ဒီနံနက်​ ... ။
Posted by မေဓာဝီ at 4:47 PM0comments
ည လယ်​ ယံ ဂီတ ...
Posted by မေဓာဝီ at 4:55 PM0comments